Imodeli ye- Toulmin (okanye inkqubo ) iyimodeli yesahlulo ezintandathu ( ingqinelana nesivumelwane ) esenziwa ngumfilosofi waseBrithani uStephen Toulmin encwadini yakhe ethi "The Uses Argument" (1958).
Umzekelo weToumin (okanye "inkqubo") unokusetyenziswa njengesixhobo sokuphuhlisa, ukuhlalutya nokubeka iingxabano.
"Yintoni eyenza ukuba iingxabano zisebenze? Yintoni eyenza iingxabano ziphumelele? Igosa laseBrithani uStephen Toulmin lenze igalelo elibalulekileyo kwiingcamango zengxabano eziyiluncedo kulo mgca wophando.
I-Toulmin yafumana iziqendu ezintandathu zeengxoxo:
[T] i- Toulmin model isinika izixhobo ezifanelekileyo zokuhlalutya iingxenye zeengxabano. "
(J. Meany noK. Shuster, ubuGcisa, ukuPhikisana, kunye nokuBela . IDEA, 2002)
Ibango : Ingxelo yokuba into enjalo.
Iinkcukacha : Ukuxhaswa kwebango.
I-Warrant : Ikhonkco phakathi kwebango kunye nezizathu.
Ukuxhaswa : Inkxaso yesigunyaziso.
Ukumgangatho : Iqondo lokuqinisekisa ngokuchanekileyo ekusebenziseni ukuphikisa.
Ukubuyisana : Okungekho kumbango wokuqala.
"Imifanekiso ye-[Toulmin] ye- 'adatha 'ekhokelela' kwibango , 'edibaniswa' ne- warrant 'nayo nayiphi na imfuneko' yokuxhasa , 'ibe nempembelelo enkulu njengendlela entsha yokucinga, ngokukodwa phakathi kwabaphengululi beengxoxo kunye nokuthetha . "
(I-CW Tindale, i- Argumentation ye-Rhetorical . Sage, 2004)
Ukusebenzisa i-Toulmin System
Sebenzisa i-part-part Toulmin inkqubo yokuqala ukuhlakulela ingxabano. . .. Nantsi inkqubo yeToumin:
Yenza ibango lakho.
Ukubuyisela okanye ukufaneleka ibango lakho.
Nika izizathu ezifanelekileyo zokuxhasa ibango lakho.
Cacisa iingcamango ezingundoqo ezidibanisa ibango lakho kunye nezizathu zakho. Ukuba ukucinga kwangaphakathi kukuphikisana, kunika inkxaso.
Ukubonelela ngezizathu ezongezelelweyo zokuxhasa ibango lakho.
Yazisa kwaye uphendule kwiingxabano ezinokwenzeka.
Dweba isigqibo, sichazwe ngokukhawuleza.
(Lex Runciman, uCarolyn Lengel, kunye noKate Silverstein, abaSebenzayo ukuhambelana noMlobi wemihla ngemihla , ngo-4 ku-Macmillan, 2009)
I-Toulmin Model kunye neSylogism
" Imodeli kaToumin impela ibilisa ekunyuseni kwe-syllogism ... Nangona iimpendulo zabanye zikulindeleke, imodeli ijoliswe ngokukodwa ekumele imele ingxoxo malunga nesithethi okanye umbhali oqhubela phambili ingxabano. ihlala ingenakwenzeka: Ukwamkeleka kwebango akukwenziwe kuxhomekeka kwiinkqubo eziphakamileyo zeengxoxo kunye nokuchasene nebango. "
(FH van Eemeren kunye noR. R. Grootendorst, iNkcazo yokuHlanganisa .
Toulmin kwi-Toulmin Model
"Xa ndabhala [ Iindlela Zokuphikisa ], injongo yam yayiyifilosofi ngokucacileyo: ukugxekwa ukucinga, okwenziwa ngabantu abaninzi beengcali zefilosofi zase-Anglo-Amerika, ukuba nayiphi na ingxabano enokuthi ibekwe ngokusemthethweni.
"Andizange ndibe ngandlela-thile ukuchaza ingcamango yeengcamango okanye ingxabano: ukukhathazeka kwam kwakukho kwimiqulu ye-epistemology yenkulungwane ye-20, kungekhona ingqiqo engaqhelekanga . kuthiwa ' ngumzekelo weToumin .' "
(UStephen Toulmin, i -Uses of Argument , rev.
ehleliwe. Cambridge Univ. Cinezela, 2003)
Yintoni Ubungqina Ekubunjweni?
Imikhosi ye-Rock Top Music 6 ehlabathini
Gcwalisa iRazz-Up-Up routine
Top Iron Maiden Iingoma zee-80s
Inkcazo kunye nemizekelo yokuBhala kwi-Intanethi
Funda indlela yokudibanisa iilwimi zesiJapane
Iingcebiso malunga nendlela yokufumana kunye nokucula i-Whistle Register
4 Iinkqubo zoPhuculo lwe-Breaststroke Kick yakho